Marotandrano Mandritsara Lehilahy 3 tratra nitondra rongony 45 kg
Verrerie Toamasina Tratra ireo mpamaky trano isan-kalina
Lehilahy miisa dimy mpamaky trano isan-kalina eny amin’ny faritra Verrerie sy Tsarahonenana no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny FIP Toamasina omaly alahady 05 jolay.
Rongony 4 gony milanja 45 kg no saron'ny zandarimariam-pirenena tany Ambodimadiro kaominina Marotandrano distrikan'i Mandritsara, ny alin'ny 14 hifoha 15 aprily teo.
Angom-baovao tonga teo am-pelatananan'ny komandin'ny tobim-paritry ny zandarimaria ao Marotandrano no nahatratrarana ireo olona miisa telo, kalazalahy amin'ny fitaterana sy fivarotana rongony an-tsokosoko ao anatin'iny faritra iny. Ela nitoratorahana ka nahavoa mason'angatra izy ireo. Efa nipetrapetraka tsara mantsy ny velam-pandrika nataon'ny zandarimaria any an-toerana. Mitohy ny fanadihadiana lalina mba ahafantarana ny olona izay mety mpiray tsikombakomba amin’izy ireo.